China Pressure Vessel Mpanamboatra sy mpamatsy | Ringa avo roa heny
Ny fitaovam-pitaterana fanerena dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny indostrian'ny solika, ny angovo, ny fikarohana siantifika ary ny sehatra miaramila sns.
fampiharana: Zavamaniry Flyash Block Plant, Fitaovana fananganana trano, zavamaniry AAC
Vatan'ny fitoeran-tseranana fanerena dia misy varingarina, lohany famehezana, flange, singa famehezana, pore misokatra ary fantsom-pifandraisana, fiterahana.
Ankoatr'izay, voaaro amin'ny fitaovana fiarovana, metatra ary fiarovana anatiny ihany koa.
PW = 1.6Mpa Tankafitran'ny entona-pitrandrahana solika
Sokajy misongadina m3
30,08 50,04 100,23
Max.Fahafahana mameno T
Fitaovana Weight Kg
Rano mafana:Ny mari-pana ao anatiny 90℃;
famaritana Savaivony mm
Rano mafana Nomery amponga
Mikoriana T / h
Fatran'ny mivezivezy m / s
Amponga(Steam) Mikoriana T / h
Heat Transfer fampisehoana Famindrana hafanana m2 /℃
Lanjan'ny fitaovana Kg
Previous: Boiler Electric
Manaraka: AAC Autoclave sy Boiler
sambo fanerena china
sambo fanerena sinoa